संक्रमित नेपाली आएको विमानका सबै यात्रुलाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुन्छ भन्ने छैन, कस्तो हुन्छ सम्भावना? – MySansar
संक्रमित नेपाली आएको विमानका सबै यात्रुलाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुन्छ भन्ने छैन, कस्तो हुन्छ सम्भावना?
मार्च १७ अर्थात् चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षकी एक किशोरी यात्रुमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएपछि कतार एयरवेजको सो फ्लाइटमा आएका अन्य लगभग सबै यात्रु सम्पर्कमा आएको खबर आइसकेको छ। यो बीचमा त्यो विमानबाट आउने सबै यात्रुलाई कोरोना भाइरस लागेको जस्तो गरेर प्रचार गरियो। हो, त्यही विमानमा आउनेहरुलाई पनि संक्रमण हुने सम्भावना त हुन्छ र सबै यात्रुलाई संक्रमण हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुन्न। त्यसमाथि बिहान साढे १० बजे नेपाल उत्रेकी थिइन् ती किशोरी। तर सञ्चार माध्यमहरु र सोसल मिडियामा QR 650 कोडको कतार एयरवेजको विमानबाट आएको भनेर पनि लेखिए। जबकि त्यो विमान त्यो दिन रातिमात्र अवतरण गरेको थियो। ती किशोरी आएको विमान QR 652 थियो।
खासमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वा अरु कुनै सरकारी निकायले नै यो फ्लाइट नम्बरको विमानबाट आएका सबै यात्रु सम्पर्कमा आउनु भनेर सूचना निकालेको भए अन्यौल हुने थिएन। पर्यटन बोर्डले यस्तो खालको सूचना त निकाल्यो तर त्यसमा फ्लाइट नम्बर थिएन।
यसले त्यो दिन काठमाडौँ उत्रिएका कतार एयरवेजका तीन वटा विमानका सबै यात्रुलाई अन्यौलमा पार्‍यो। जबकि QR 652 मा रहेका यात्रुका हकमा मात्र त्यसो हुनुपर्थ्यो।
यो तलको फेसबुक सन्देश हेर्नुस्-
यो भियतनामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना हो। त्यसमा फ्लाइट नम्बरसहित यात्रुहरुलाई सम्पर्कमा आउन भनिएको छ। यसैमा फ्लाइट QR 976 पनि उल्लेख छ। यो फ्लाइट दोहाबाट नोइबाइमा मार्च १७ मा अवतरण भएको थियो।
त्यही दिन दोहाबाट काठमाडौँमा संक्रमण पुष्टि भएकी किशोरी उत्रिएकी थिइन्। ती किशोरी र भियतनामी साथी फ्रान्सबाट दोहासम्म एउटै विमानमा थिइन्। भियतनामले संक्रमित देशबाट आएका सबैलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखेको थियो। त्यसै क्रममा ती भियतनामीलाई संक्रमणको पुष्टि भयो। त्यसपछि भियतनामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विमानमा रहेका सबैलाई सम्पर्कमा आउन भनेको थियो। ती भियतनामीले नेपाली साथीलाई पनि जानकारी गराइन्। उनी त्यही दिन टेकु पुगिन्, उनको टेस्ट भयो र उनमा पनि संक्रमण भएको पुष्टि भयो।
अस्ति मंगोलियामा फेक इन्फरमेसन सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा विभिन्न देशका साथीहरु भेटिए। त्यस क्रममा एक जना भियतनामी साथी पनि भेटिए। ती भियतनामी साथीकी बहिनी संक्रमण भएकोहरुलाई उपचार गराउने अस्पतालमा काम गर्ने रहिछिन्। उनीबाट पाएको जानकारी अनुसार फ्रान्सबाट भियतनाम आएका दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये एक जना १९ मार्चमा आएकी थिइन् भने एक जना १७ मार्चमा। ती यात्रु सिट नम्बर 36 D मा थिइन्।
तपाईँलाई लाग्ला सिट नम्बरको यसमा के महत्त्व ?
नेसनल जियोग्राफिकले गत जनवरीमा एउटा समाचार दिएको थियो जसमा प्लेनभित्र कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ भन्ने जानकारी थियो। त्यसमा दिइएको जानकारी अनुसार झ्याल छेउमा बस्ने यात्रुलाई संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ। विमानका सबै यात्रुमा यो फैलने नभई निश्चित क्षेत्र हुन्छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यसमा यही हो र हुन्छ भन्ने निश्चित हुन्न। यो सब सम्भावनाका कुरा हुन्।
तर यो हचुवामा बनाइएको पनि होइन। यसमा डब्लुएचओले भनेका कुराहरु पनि छन्। न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित सार्स फैलँदाको अध्ययनको नतिजा पनि छन्।
इन्डेपेन्डेन्ट र न्युयोर्क टाइम्समा पनि यस्तै खबर छापिएका छन्।
त्यसैले विमानमा रहेका सबैमा नै संक्रमण हुने र सबै दोषीको व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्न। तर ती सब यात्रुको निगरानी गर्न भने जरुरी छ जुन अहिले भइरहेको पनि छ। कान्तिपुरमा आज प्रकाशित समाचार अनुसार विमानमा रहेका १२५ जना यात्रु सम्पर्कमा आइसके। बाँकीको खोजी हुँदैछ।
हामीले संक्रमित देशबाट आएका यात्रुहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्नेमा त्यो नगरी गल्ती गर्‍यौँ। लगभग त्यही समय कतारबाट आएका एक यात्रुले उतिबेला नै लेखेको यो पोस्ट पनि हेर्नुस्-
नेपाल र कोरोना भाइरसम अमेरिकाको एक विश्वविध्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। अमेरिकामा तीव्र रुपमा फैलिरहेको…
Posted by Ishan Mainali on Tuesday, March 17, 2020